Ny kanto Origami mahafinaritra nataon'i Cristian Marianciuc | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Inspiration
Azo antoka fa hanontany tena ianao ny amin'ny vidin'ny ireto crano mahafinaritra noforonin'i Cristian Marianciuc ireto. Ireo crane dia noforonina tamin'ny alàlan'ny origami sy ilay kanto taratasy izay miorim-paka ao Japana.
I Marianciuc dia efa nanao fanamby tamin'ny tenany hamorona isan'andro Origami mandritra ny 1.000 andro ary io dia izao rehefa nasehony ny ampahany tamin'io asa lehibe natao io. Asa iray izay azonao vidina amin'ny fivarotana Etsy ho anao izay liana amin'ny fanomezana fanomezana tsotra sy hafa fotsiny.
Ary izy no nandany 1.000 XNUMX andro tamin'ny famoronana ireo andiany origami haingon-trano amin'ny loko sy ny famaranana rehetra. Taorian'ny namoronana ireo Origami 1.000, dia tsy nilavo lefona ity mpanakanto ity tamin'ny ezaka nataony hanohizana ny famoronana ireo zavaboary mamorona izay manandrana maneho ireo karazan'aina sy singa rehetra.
Ilay iray ihany milaza fa manadihady hatrany lohahevitra bebe kokoa sy teknika samihafa hahitana hatrany ny aingam-panahy izay mitarika azy hanohy hamorona ireo origami manana fahalehibiazana lehibe ary mametraka fikarakarana be dia be amin'ny antsipiriany tsirairay avy.
Ny sary tsirairay zarainay dia mampiseho ny tsy fahampian'ny tsirairay amin'ireto origami ireto ny fitokanana saika nezotika resin'ny "orgasme" amin'ny fijerena maso an'ireo sary ireo amin'ny taratasy.
Ny haavon'ny Ny antsipiriany dia tsy mampino ho an'ny ankizy kely izay izy ireo, satria ny tendron'ny rantsan-tànany no mazàna mitazona eo an-tanan'izy ireo ireo origami tsara tarehy azonao atao jereo ao amin'ny Instagram.
Ao amin'ny tambajotra sosialy izay hahitanao izany ny rohinao mankany amin'ny fivarotana Etsy aiza no hividianana ny sasany amin'ireo zavaboariny mahafinaritra. Mpanakanto hanaraka ary ho gaga amin'ny hamaroan'ny Origamioma tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Mandao anao izahay miaraka amin'ireo an'i Gonzalo Calvo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ilay Origami mahafinaritra an'i Cristian Marianciuc miaraka amin'ireo vano mahafinaritra